कटप्पाकी छोरी दिव्याले मोदी लाई किन लेखिन चिठी ?
चर्चित सिनेमा बाहुबली र बाहुबली –२ बाट चर्चा कमाएका सत्यराज अर्थात कटप्पाकी छोरी दिव्या सत्यराज आज भोली चर्चामा छिन । भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार दिव्याले भारतका प्रध..
आइफामा शाहिद कपुर उत्कृष्ट अभिनेता र आलिया भट्टले उत्कृष्ट अभिनेत्री
१८ औं अन्तर्रािट्रय इन्डियन फिल्म एकेडेमी अवार्ड (आइफा) सम्पन्न सनिवार न्यूयोर्कमा सम्पन्न भएको छ । अवार्डमा उत्कृष्ट सिनेमाको अवार्ड सोनम कपुरको ‘निर्जा’ ले पाएको छ । ..
सेफअलि खानको छोरी साराले निर्देशक अभिषेक कपूरको सिनेमा केदारनाथबाट बलिउडमा डेब्यू गर्न लागेकी छिन । सिनेमामा साराले सुशान्त सिंह राजपूत संग रोमान्स गर्दै छिन । साराको ड..
विवेकलाई यसकारण छाडेकी थिईन् ऐश्वर्याले
अभिनेता सलमान र अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चनको पुरानो अफेयरको चर्चा बलिवुडमा अहिले पनि हुन छाडेको छैन । सन् १९९९ देखि २००१ सम्म यी दुई एक अर्काको प्रेममा थिए । यी दुईको..
शाहरुखले गरे गौरीको गर्भ तुहिएको खुलासा
अभिनेता शाहरुख खानले बलिवुडमा प्रवेश गरेको २५ वर्ष पूरा भईसकेको छ । त्यस्तै उनको वैवाहिक जीवनले पनि २५ वर्षे यात्रा पूरा गरेको छ । हालै मात्र दिएको एक अन्र्तवार्तामा अभ..
ड्रामा कम्पनी छायांकनमा सुनिलले गरेँ ढिला
कपिल शर्माको शो बाट बाहिरिएका कमेडियन सुनिल ग्रोभरको नयाँ शो आउने चर्चा बिगत केही समय यता निकै चलेको छ । केही दिन अघि मात्रै उनले सोनी टिभिको नयाँ शो ड्रामा कम्पनीमा अत..
दोस्रो हलिवुड सिनेमामा यस्तो देखियो प्रियंकाको लुक्स
अभिनेत्री प्रियंका चोपडाले दोस्रो हलिवुड सिनेमाको छायाकंन सुरु गरेकी छिन् । प्रियंकाका केही तस्बिरहरु सार्वजनिक भएका छन् जसमा उनलाई अपरिचित व्यक्तिले अपहरण गरिरहेको र उनी त्यो समस्याबाट बच्न खोजेको देख्न सकिन्छ । यी तस्बिर प्रियंकाको नयाँ सिनेमा ईज नट ईट रोमान्टिकका हुन् जसमा प्रियंका योगा एम्बेस्डर ईसाबेलाको भूमिकामा छिन् । न्य..
मृत्युलाई जितेका जोनी लिवरका छोराको सिनेमामा आउने तयारी
भारतीय कमेडियन जोनी लिवरका छोरा जेसे लिवरले बलिवुडमा डेब्यु गर्ने कुराले यतिबेला चर्चा पाएको छ । अन्य केही भारतीय सेलिब्रेटीका छोराछोरीले बलिवुड डेब्युको तयारी गरिरहँदा जेसेलाई पनि केही निर्माताहरुले सिनेमाको प्र्रस्ताव राखेको भारतीय सञ्चार माध्ययमले जनाएका छन् । जोनीका छोरा जेसे लिवर म्युजिसियनहुन् । उनी ड्रम बजाउँछन् । जेसेले ..
१ सय ८० करोडमा मालिक हुन् प्रभास, के के छ भौतिक सम्पत्ति?
सिनेमा बाहुबली रिलिज भएको दुई वर्ष पुगेको छ । सिनेमाले भारतीय सिनेमाको ईतिहासमा सबैभन्दा धेरै कमाउने सिनेमाको रकेर्ड राखेको थियो । तर पछि यो रेकर्ड यसकै सिक्वेलले तोडेको छ जुन २०१७ को अप्रिल २८ मा रिलिज भएको थियो । बाहुबली सीरीजको सफलतासँगै सिनेमाका कलाकारहरु विश्वभरिनै चर्चित भए । सबैभन्दा बढी चर्चामा आए अभिनेता प्रभास । [&hell..
ईद २०१७ को अवसर पारेर रिलिज भएको सिनेमा ट्युबलाईटले खासै राम्रो सफलता पाएन । सलमान खानको मुख्य भूमिका रहेको यो सिनेमाबाट निर्माता र वितरकहरुलाई घाटा बेहोर्नु परेको छ । यहि कारण वितरकहरु सलमानको घरमै पैसा फिर्ता माग्न पुगेको भारतीय सञ्चार माध्ययमले जनाएका छन् । सलमानका पिता सलिम खानले पनि वितरकहरुलाई पैसा फिर्ता दिने बताएका छन् [..
जितेन्द्रले दिए छोरी एकतालाई महंगो गिफ्ट
निर्देशक एकता कपूरको ४२ जन्म दिनमा उनलाई बुबा जितेन्द्र कपूरले गिफ्टमा लक्जरी अर्पाटमेन्ट दिएका छन । जितेन्द्रले एकतालाई साउथ मुम्बई वर्लीमा घर गिफ्ट गरेका हुन । घरको मूल्य लगभग १२ देखि १३ करोड सम्म छ । एकताको नयाँ घरबाट अरेबियन समुद्रको राम्रो नजारा देखिन्छ । यो अपार्टमेन्ट न्यू वर्ली हाई प्रोजेक्ट अर्थात ओमकार १९७३ को [&helli..
कपूर खानदानका दुई दिदी बहिनीको दुश्मनी कहिले सम्म ?
कपूर खानदानले छोरी बुहारीलाई बलिवुडमा काम गर्न रोक लगाएको छ । यसको बावजुद पनि अभिनेत्री करिश्मा कपूर र करीना कपूरले सिनेमामा काम गरे । तर उनीहरुले सिनेमामा काम गरेकै कारण उनीहरुका आमा र बुवा एकअर्काबाट अलग भए । किनकी करिश्मा र करीनाका बुवा रणधीर छोरीहरुले सिनेमामा काम नगरुन् भन्ने चाहन्थे तर आमा बबिताले उनीहरुलाई सिनेमामा [&hell..
नागार्जुनका छोरा बुहारीको, ३ दिने विवाह ४० दिने हनिमुन
दक्षिण भारतीय सिनेमाका सुपरस्टार अभिनेता नागार्जुनका छोरा नागा चैतन्य र अभिनेत्री सामन्था यहि वर्षको अक्टोबर ६ मा विवाह बन्धनमा बाँधिने भएका छन् । केही समय अघि सिनेमाकै शैलीमा ईन्गेजमेन्ट गरेर चर्चामा आएको यो जोडीको विवाह हिन्दु र क्रिश्चियन धर्मअनुसार हुनेछ । तीन दिनमा सम्पन्न हुने विवाह भारतको गोवामा हुने भारतीय सञ्चार माध्ययम..
भारतका प्रभावशाली ५० व्यक्तिको सूचिमा रणवीर र प्रभास
बलिवुड अभिनेता रणवीर सिंह र दक्षिण भारतीय सिनेमाका सुपरस्टार प्रभास भारतका प्रभावशाली ५० युवाको सूचिमा परेका छन् । जी क्यु ईण्डिया म्यागजिनले ५० प्रभावशाली भारतीय युवा २०१७ को सूचि जारी गरेको छ जसमा कलाकारतर्फ रणवीर सिंह, प्रभास, राधिका आप्टे, दिलजित दोसांझ, राजकुमार राव र र्यापर बादशाह परेका छन् । जी क्युले यस सूचिमा ४० भन्दा [..
साउथ इण्डियन हिरो विजयको फ्यानसँग विहेः बाउले राखिदिएका थिए प्रस्ताव
थिरुपाची, पोक्किरी, विल्लु, कावलन, थुपक्की, कथ्थी, थेरी जस्ता सफल सिनेमामा काम गरिसकेका दक्षिण भारतीय अभिनेता विजयको विवाह प्रसंग निकै चाख लाग्दो छ । विजयले आफ्नै फ्यानसँग विवाह गरेका हुन् । हाल विजयकी श्रीमती संगीता सूर्णलिंगमलाई विजयको अभिनय एकदमै मन पर्थ्यो । उनी विजयकी डायहार्ट फ्यान थिईन् । यहि कारण उनी एक पटक विजयलाई भेट्न..